Rifletti, oggi, su coloro nella tua vita che Dio vuole che tu ami | Io amo Gesù
Na-atụgharị uche taa na ndị ndụ gị na Chineke chọrọ ka ị hụ n'anya
di Paolo Tescione - November 8, 2020
Ya mere, mụrụnụ anya, n'ihi na ị maghị ụbọchị ma ọ bụ oge awa ọ ga-abụ. ” Matiu 25:13
Cheedị ma ọ bụrụ na ịmara ụbọchị na oge ị ga - agafe na ndụ a. N'ezie, ụfọdụ ndị maara na ọnwụ na-eru nso n'ihi ọrịa ma ọ bụ afọ ndụ. Ma chee echiche banyere nke a n’ime ndụ gị. Gịnị ma ọ bụrụ na Jizọs gwara gị na echi bụ ụbọchị ahụ. Dịla njikere?
O yikarịrị ka ọ ga-enwe ọtụtụ nkọwa bara uru nke ga-abata n'uche gị nke ị ga-achọ ilekọta. Ọtụtụ ga-eche maka ndị niile ha hụrụ n'anya na mmetụta nke a ga-enwe na ha. Debe ihe niile n'akụkụ maka ugbu a ma tụlee ajụjụ site n'otu echiche. Dị njikere izute Jesus?
Ozugbo ị gafere site na ndụ a, naanị otu ihe ga - adị mkpa. Gịnị ka Jizọs ga-agwa gị? Nwa obere oge tupu Akwụkwọ Nsọ ae hotara n’elu, Jizọs tụrụ ilu banyere ụmụ agbọghọ iri na-amaghị nwoke. Fọdụ maara ihe ma nwee mmanụ maka oriọna ha. Mgbe nwoke ahụ na-alụ nwanyị ọhụrụ rutere n’abalị, ha jikere oriọna ka ha zute ya ma kelee ha. A naghị akwadebe ndị nzuzu, mmanụ adịghịkwa n’oriọna ha. Mgbe nwoke na-alụ nwaanyị ọhụrụ bịara, ha funahụrụ ya ma nụrụ okwu ndị a: "N'ezie ana m agwa gị, amaghị m gị" (Matiu 25:12).
Mmanụ dị n’oriọna ha, ma ọ bụ enweghị ya, bụ ihe nnọchianya nke ọrụ ebere. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịdị njikere izute Onyenwe anyị n'oge ọ bụla, ụbọchị ọ bụla, anyị ga-enwe afọ ojuju na ndụ anyị. Ọrụ ebere karịrị nnọọ agụụ mmekọahụ ma ọ bụ mmetụta ịhụnanya. Afọ ebere bụ nnabata siri ike iji obi Kraist hụ ndị ọzọ n'anya. Ọ bụ omume anyị na-eme kwa ụbọchị nke anyị na-etolite site na ịhọrọ ibute ndị ọzọ ụzọ, na-enye ha ihe niile Jizọs gwara anyị ka anyị nye. O nwere ike ịbụ obere ihe ịchụrụ ma ọ bụ ihe omume dị egwu nke mgbaghara. Mana otu osila dị, anyị chọrọ ọrụ ebere ka anyị wee dị nkwadobe izute Onyenwe anyị.
Na-atụgharị uche taa na ndụ gị ndị Chineke chọrọ ka ị hụ n'anya. Kedu ka ị mere nke ọma? Ruo ókè hà a isaa ka nkwa gị? Afọ ole ka ị dị njikere ịga? Ihe obula batara gi n’obi nihi na onwegh onyinye a, tinye anya na nka ma rio kwa Chineke ariri amara ya ka gi onwe gi we buru kwa onye nwere uche ma di njikere izute Onyenwe anyi n’oge obula.
Onyenweanyị, ana m ekpe ekpere maka onyinye karịrị nke mmadụ nke ọrụ ebere na ndụ m. Biko mejupụta m n'ịhụnanya maka ndị ọzọ ma nyere m aka imesapụ aka n'ụba n'ịhụnanya a. Ka ọ ghara igbochi ihe ọ bụla, ma na-eme nke a, dịrịla njikere izute gị oge ọ bụla ị kpọrọ m n'ụlọ. Jesus ekwere m na gị.
Ntụgharị uche nke ụbọchị: ụbọchị 40 n'ọzara
Chineke na enyere anyi aka iza nsogbu ndi n’eto eto